မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နေရာတည်းသာရှိသော အင်းဝဈေးချိုရပ် သရက်သီးဓားပေါက်ခုတ် သရက်ချဉ်လုပ်?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နေရာတည်းသာရှိသော အင်းဝဈေးချိုရပ် သရက်သီးဓားပေါက်ခုတ် သရက်ချဉ်လုပ်??
တံတားဦး၊ မေ ၅
သရက်ချဉ် သိပ်လုပ်ငန်းရာသီချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံ တားဦးမြို့နယ် အင်းဝဈေးချိုရပ် တွင်ရှိသော သရက်ချဉ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှ ယခုအခါသရက် သီးဓားပေါက်ခုတ်လုပ်ငန်းများ စ တင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိ ရသည်။ အင်းဝဈေးချိုရပ်တွင် သရက် ချဉ်သိပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၂ဝ ခန့်ရှိရာ သရက်သီးအချဉ်မျိုး အကြမ်းသီးများကိုဝယ်၍ သရက် ချဉ်ဖတ်ရအောင် ဓားဖြင့်ခုတ်လှီး သူများအား ငှားရမ်းကာ သရက် ချဉ်ဖတ်ထုတ်လုပ်ကြပြီး ဓားပေါက် ခုတ်ရာမှ ရရှိသော သရက်ချဉ်ဖတ် များကို စဉ့်အိုးကြီးများတွင်ဆားဖြင့် စိမ်၍ နောက်ဆုံးတွင် ပလတ်စတစ် ဖြင့်ထုပ်ကာ သေတ္တာများအတွင်း ထည့်ပြီး ရေဓာတ်ကုန်သည်အထိ ထားရှိပြီးမှ ဈေးကွက်အတွင်းရောင်း ချခြင်းဖြစ်သည်။
”သရက်ချဉ်ထုတ်လုပ်တာက နှစ်စဉ်တန်ခူးလကနေ ဝါဆိုလအထိ ပါ။သရက်ချဉ်အတွက်နက်တဲ့၊ သုံးလုံးတံတောင်၊ ပန်းဘင်္ဂလား၊ ပုစွန်၊ ဗျားကြီးနဲ့ ဦးမေဓိရမျိုးသရက် သီးတွေကိုဝယ်ပြီး သရက်ချဉ်ဖတ် ရအောင် ဓားနဲ့လှီးတဲ့သူတွေငှား လုပ်တာပါ။ ခုတ်သားကျွမ်းကျင်သူ က တစ်နေ့ ၁ဝ တောင်း၊ ၁၂ တောင်း၊ လက်သင်ကျတော့ တစ်နေ့ ခုနစ်တောင်း၊ ရှစ်တောင်း ပြီးပါတယ်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ကျပ် ၅ဝဝဝ ကနေ ကျပ် ၉ဝဝဝ အထိ ရကြပါတယ်”ဟု အင်းဝ ဈေးချို ရပ် ကုက္ကိုလ်ရိပ်သရက်ချဉ် လုပ်ငန်းမှ ဒေါ်မိုးရီက ပြောသည်။
နှစ်စဉ်ရာသီချိန်၌ သရက်ချဉ် သိပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ့်အိုးများအသုံးပြုလုပ်ကိုင်ရ၍ အိုး ထောင်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြောင်း ယခင် နှစ်က သရက်ကြမ်းသီးတစ်တင်း ကျပ် ၃၅ဝဝ ဈေးပေးဝယ်ယူရသ ဖြင့် သရက်ချဉ်သိပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အိုးထောင်တိုင်း အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသော်လည်း ယခုနှစ် တွင် တစ်တင်းကျပ် ၃ဝဝဝ ဈေး ဖြင့်သာ ဝယ်ယူလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ယခုနှစ် ဈေးကွက်အချိန်မရောက် သေးသော်လည်း အရှုံးမပေါ်နိုင် ဟု တွက်ဆထားကြကြောင်း အင်းဝ ဈေးချိုရပ်မှ သရက်သီးပွဲစား ကို ဟိန်းသန့်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်းဝတစ် နေရာတည်းသာ သရက်ချဉ်သိပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြီး ယခင်နှစ်က သရက်ချဉ်တစ်ပိဿာကျပ် ၁၇ဝဝ မှ အမြင့်ဆုံးဈေးကျပ် ၂ဝဝဝ အထိ ရောင်းဈေးရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင်အ ဖွင့်ဈေးပိုမိုနိုင်ကြောင်း သရက်ချဉ် ဈေးကွက်မှ သိရသည်။
ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားကျောင်း နှစ်(၁၂ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရချိန်တွင် ကြည်လင်းနှင့် အောင်ဝင်းဇော် အတူမရှိ ဟုဆို
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈ ဦးကို ထိုင်းဘက်မှမြန်မာဘက်သို့ လာေ??